Imifanekiso eKate Bosworth ihamba ze kunye neMiboniso yezesondo - Indawo Yolondolozo Lwembali Yomboniso
Imifanekiso eKate Bosworth ihamba ze kunye neMiboniso yezesondo
Jonga umdlali we-blonde kunye nemodeli uKate Bosworth ehamba ze kunye nemifanekiso eshushu evuzayo evela kwi-iCloud yakhe, ukudityaniswa kweze-sex zeze apho wabonisa khona ama-boobs ne-esile! Senze ukudityaniswa kwazo zonke iividiyo zakhe ezishushu kwinto enye!
UCatherine Ann Kate Bosworth ngumlingisi waseMelika kunye nemodeli kwaye uneminyaka engama-36 ubudala. Uvele kwindima ezincinci kwiifilimu ezithi 'The Whisperer Horse' kunye no'Khumbula iiTitans ', kwaye waphakama waduma ngendima yokuba ngumdlali wolutsha kwi-'Blue Crush'. Wayenendima kwiifilimu 'iWonderland', 'uBobby Darin', 'Ngaphesheya koLwandle', 'uSuperman Returns', '21', 'Izinja zeStraw', 'Kwaye Ngelixa Silapha', kunye 'NoAlice'. Kutshanje, uvele kwiifilimu ezoyikisayo, 'Phambi kokuba ndivuke', 'Amakhaya' kunye nezobugcisa bezesayensi 'i-I-Land'. Ngo-2011, uBosworth waqala ukuthandana nomlawuli waseMelika UMichael Polish , awayedibene naye ekuqaleni kwalonyaka xa wayemalathisa kwi 'Big Sur'. Babhengeza ukubandakanyeka kwabo kwi-2012 kwaye batshata kwi-2013.
UKate Bosworth uhamba ze iifoto
Ukuvuza okutsha kulapha, kwaye ndiqinisekile ukuba uyonwabile! Hlala uqinile kwaye wonwabele olu hambo lonwabisayo! Imifanekiso enganxibanga edumileyo kaKate Bosworth evuzayo kwiwebhu, kuphela ngamehlo akho! UKate uneminyaka engama-36, kodwa akamdala kakhulu kwisibuko seeselfie ehamba ze abonise neebhokhwe zakhe. Kwakhona, wasinika isiziba esineenwele kunye neenwele ezincinci! UKate unama-boobs amancinci kunye nomzimba we-anorexic. Mhlawumbi wayenemicimbi ethile yengqondo okanye iingxaki zokutya. Kodwa ke, siyamthanda, enyanisweni, siyamthanda!
Abadlali abangcolileyo baseHollywood zizinto esizithandayo ezivuzayo, kodwa sicinga ukuba nawe uyabathanda abanye abadumileyo nudes , apho sinokubona khona iimodeli ezininzi, iimvumi kunye ne-Instagram sluts efikelela kwiinkwenkwezi!
UKate Bosworth uhamba ze kwimiboniso yesini
Ekuqaleni, uKate Bosworth akanasiphelo kumdlalo bhanyabhanya we 'Big Sur'. Ulele ebhedini nomfana lowo, ulele ngecala ubonwa ziititshi ezihamba ze zombini. Njengokuba ethetha naye kwaye emva koko uhlala ukusebenzisa ifowuni. Sibona ezinye ii-boobs zakhe njengoko ehlala emqolo emva koko ahlalele ukumanga lo mfo. Emva koko uKate Bosworth uphinde wahamba ze ebhedini nomfana, ebonisa ama-boobs ahamba ze ngelixa umfana ezanga isifuba sakhe. Siyaqhubeka ukumbona engenanto ngelixa esenza kunye nomntu wakhe.
Kwenye indawo evela 'Kwaye Ngelixa Silapha'. UKate Bosworth ulele emqolo ehamba ze, walala nomfana kule ndawo imnyama sikhanyisile ukuveza iingono zakhe. Umfo uvimba umbono wethu we-boob yakhe yasekunene, mhlambe.
Ke nantsi uKate Bosworth kwindawo evela 'eWonderland'. Unxibe ibra eluhlaza okwesibhakabhaka njengoko ehleli kwikhawuntara yokuhlambela, kwaye utyhila iesile lakhe ecaleni ngaphambi kokuba babelane ngesondo nzima. Ukugcuma kwakhe kwawenza loo mhla!
Nantsi indawo 'yeenja ezityaliweyo', kwaye uKate Bosworth ulapha enxibe umwundu lowo umfana akhululayo ukuveza iimpahla zakhe zangaphantsi. Emva koko uyahamba akhuphe ipanty yakhe. Sibona iesile lakhe lize ze xa besabelana ngesondo. U-Kate akaqinisekanga ukuba uyafuna okanye cha, yenza ukuba uhenyuze ingqondo yakho. Siphinda sibone ukukhawuleza kweepanty zakhe zikhutshwe, kwaye emva koko kubekho ukubuyela umva kwe-esile yakhe ehamba ze njengoko umntu owahlukileyo emjikisa esofeni.
Ividiyo yokuhlanganiswa kwesondo likaKate Bosworth
Wamkelekile kwihlabathi lemixokelelwano yesini kaMostra Musa! Namhlanje sisityebi ngomnye umntu, umdlali oshushu uKate Bosworth kwiividiyo zesondo ze! Yonwabele ividiyo!
hilary duff unganxibanga pussy
belle delphine imifanekiso yesini
u-amanda seyfried umsebenzi ovuthuzayo
Yesjulz iteyiphu yesini epheleleyo yevidiyo